सिहदरवार आगलागी बाट ध्वस्त भएको त्यो इतिहास - A complete Nepali news portal based on news & views
सिहदरवार आगलागी बाट ध्वस्त भएको त्यो इतिहास
२२ आश्विन २०७७, बिहीबार २१:२१ October 8, 2020 Buddha Sharan
राती त्यस्तै १० बजेको हुँदो हो। एकाएक ‘विद्युत् सर्ट’ भएर आगलागी भएको मलाई बताइयो। म बालुवाटारबाट मोटर टिपेर हिँडिहालेँ। तत्कालीन नाचघर अर्थात् राष्ट्रिय पञ्चायत भवनमा पुगेर आगलागीको त्यो दृश्य हेररिहँदा मेरा आँखा थामिएनन्। सिंहदरबारमा लागेको त्यो आगोको राप पुतलीसडक, थापाथली, बानेश्वर, घट्टेकुलो र भद्रकालीसम्म पुगेको थियो। आफूले केही गर्न नसके पनि त्यहाँ उपस्थित भएर आगलागीलाई काबुमा ल्याउन खटिरहेका तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई हौसला र प्रोत्साहन दिनु मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य थियो। बिहान हुँदा नहुँदै राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्यका साथ त्यहाँ पुगेका थिए। नेपाली सेनाको बहादुरी र साहसकै कारण सिंहदरबारको अग्रभाग ध्वस्त हुनबाट जोगाउन सम्भव भएको थियो।
रातभरि त्यहाँ बसेर बिहान बालुवाटार फर्किरहँदा मेरो हालत युद्धमा सबै कुरा हारेर लुरुलुरु घर फर्किएको सिपाहीको जस्तो भएको थियो। बालुवाटार पुगेपछि राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर नैतिकताको आधार दर्साउँदै आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएँ। तर, राजा वीरेन्द्रले राजीनामाको त्यो पत्र मलाई नै फर्काउँदै भने, “सिंहदरबारमा तिमीले आगो लगाएको होइन, तिमीले किन राजीनामा दिने ? राजीनामा पत्र आफ्नै खल्तीमा राख। मलाई सघाऊ। बस। राजीनामा दिने कुरा नगर।”
मेरो आत्माले त्यो कुरा मान्दै मानेन। मैले राजासामु ज्यादै विनम्रतापूर्वक भनेँ, “म प्रधानमन्त्री छु। मेरो जिम्मामा भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी भयो। अब एक मिनेट पनि यस पदमा बस्न मेरो मनले दिएन।” राजासँग विवाद नै पर्‍यो। मैले एकोहोरो जिद्दी गरेरै राजीनामा दिएँ। मेरो राजीनामालगत्तै नेपालस्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत एलपी सिंहले बालुवाटारमै आएर मलाई भनेका थिए, “त्यति नै घटनाका आधारमा तपाईंले किन राजीनामा दिनुभयो ? राजीनामा नै दिनुपर्ने त जरुरी थिएन।” मैले यसको जवाफ फर्काउनु उचित ठानिनँ। मात्र यति सोधेँ, “एउटा सामान्य रेलवे दुर्घटना हुँदा लालबहादुर शास्त्रीले किन प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए ? मलाई यसको जवाफ दिनूस् त ?” उनी नाजवाफ भए।
https://nepalmag.com. बाट इश्वरी ज्ञवालीले लेख्नु भएको
वर्ल्डलिंक र फेसबुकबीच सहकार्यः देशभरी फ्री एक्सप्रेस वाईफाइ प्रदान गरिने